I-Redmi K20 inokuqhayisa ngexabiso eliphantsi kakhulu | I-Androidsis
IXiaomi yeyona nto inika elona xabiso liphezulu lemali kwii-smartphones. RedmiKwinxalenye yayo, kuba yayenziwe ngaphakathi kule nkampani, ilandela amanyathelo afanayo. Ke ngoko, kunye nefayile ye- Redmi Qaphela 7 Sele ibonakalisile, ikhona kwimarike yokwaphula izikimu zamaxabiso ezisekwe ngabanye abavelisi abahambahambayo.
El Redmi K20 iya kuba sisixhobo esilandelayo senkampani, nangona siza kuthetha ngale fowuni, asikaze sithethe nto ngexabiso layo ... kude kube ngoku. Iya kuba yexabiso eliphantsi ngenene! Masibone ukuba ingakanani!
Umntu onoxanduva lokutyhilwa kwexabiso leRedmi K20 nguPan Jiutang, umhlalutyi owaziwayo wase China. Kananjalo, ngendlela yokuqikelela, wayitsho loo nto Ixabiso lesixhobo liya kuba phakathi kwe-2,000 kunye ne-4,000 yuan, Eguqula isithuba esivela kwi-260 ukuya kwi-520 euro.
Ixabiso leRedmi K20 lityhiliwe
Ukuba umsantsa wexabiso elityhiliweyo ukhulu ngendlela eyoyikisayo kuyadanisa. Nangona kunjalo, ukuba siyithatha saya kwindawo esembindini, isixhobo siya kubiza malunga ne-340 euro, Ebonakala ngathi yeyona ndawo ithengiswayo. Ukuba kunjalo, siza kujongana nesixhobo esisekupheleni Snapdragon 855 ngexabiso eliphantsi kwintengiso.
Ngaphandle koko, asazi ukuba ixabiso liza kusebenza kwiRedmi K20, eza kuthi ifike nge Snapdragon 710, okanye i-K20 Pro, eya kuba isebenzisa iSnapdragon 855. Le yinto esizakufunda ngayo kamva. Okwangoku, ulwazi olunikezwe nguPan Jiutang luyabulelwa, onesakhono esihloniphekileyo sokubetha iingqikelelo zakhe. Mhlawumbi elona xabiso lisezantsi linxulumene nemodeli ecoliweyo, ngelixa liphezulu kukwahluka kwePro.
Ngomhla we-28 kaMeyi, zombini ezi zixhobo ziyaqaliswa. Lo mhla, okukuphela kweentsuku ezi-5 kude, iRedmi iya kubenza baziwe ngokupheleleyo, ukusuka kubuchwephesha babo kunye neempawu zabo kwiinkcukacha zamaxabiso kunye nokufumaneka. Kananjalo, siza kuqinisekisa kunye / okanye siphikise konke ukuvuza kunye namarhe athe aveliswa kwezi veki zidlulileyo malunga nezi mobiles, abathembisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi K20 inokuqhayisa ngexabiso eliphantsi kakhulu
I-Galaxy A70S iya kuba nekhamera emnandi ye-Samsung ye-64MP